आज सोमबार : शुभ योग, दुई पटक अमृत बेला, कस्तो होला राशिफल ? – Gandaki Voice
Home/धर्म/ज्योतिष/आज सोमबार : शुभ योग, दुई पटक अमृत बेला, कस्तो होला राशिफल ?
आज सोमबार : शुभ योग, दुई पटक अमृत बेला, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७७ पुस १३ गते सोमबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर २८ तारिख सन् २०२०, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४१, प्रमादी नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्द्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथि रहनेछ । आज रोहिणी नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा शुभ, करणमा गर, आनन्दादि योगमा प्रवर्द्ध रहनेछ ।
सूर्य धनु राशिमा, चन्द्रमा वृष राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २५ घटि ५२ पला अर्थात १० घण्टा २४ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर ५५ मिनेटमा मित्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर १६ मिनेटमा हुनेछ ।
मेषः आज पनि समय खराब रहनेछ । आज चिसो र पखालालाले ठूलो दुःख दिने सम्भावना छ । त्यसकारण पानी उमालेर मात्रै पिउनुहोला । सडेगलेको बासी खाना होटलमा नखानुहोला । पिसाव सम्बन्धी रोग एक्कासी देखापर्न सक्छ । एक पटक स्वास्थ्य जा“च गराउनु नै उचित हुनेछ । आज गरेको लगानीबाट नोक्सानी हुनसक्छ । त्यसकारण लेनदेन व्यापार सबै कार्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला ।
मिथुनः आज पनि समय खराब रहनेछ । गर्न खोजेका काममा रोकावट, स्वास्थ्य पनि त्यति भरपर्दो नरहने, वैदेशिक रोजगार, नयाँँ पेशाको थालनीको लागि पनि आज त्यति राम्रो छैन । चोटपटक लाग्ने सम्भावना पनि छ । कुनै पनि काम गर्दा सतर्क रहनु आवश्यक छ । आज दिनमा ४ बजे नया“ कामको थालनी गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।समभर यात्रा नदर्दा नै राम्रो हुनेछ ।
कर्कटः आज पनि समय शुभ छ । स्वास्थ्य पनि भरपर्दो रहनेछ । टाढाबाट धन आउने, नयाँ काम धन्दामा लगानी गर्न मन लाग्नेछ । वृहस्पति ग्रह मजवुत रहेकाले मनमा एकप्रकारको ढुक्कपन रहने, दौडादौडी त्यति गर्नुपर्ने छैन । समयको सही सदुपयोग गर्नुहोला । समय शुभ रहेकाले समयको सही उपयोगल र नयाँ व्यापार व्यवसायमा लगानी गरे लाभ हासिल हुनेछ, यात्रा भने खराब छ ।
वृश्चिकः आज पनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । आम्दानी बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा लाभ, प्रेमप्रस· सुमधुर तथा पति–पत्नीको रमाइलो यात्रा हुनेछ । घरमा पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । आज ४ बजेपछि भने समय खराब रहने भएकाले महत्वपूर्ण कार्य तथा यात्रामा सतर्क हुनुहोला । जे काम गर्दा पनि सतर्क हुनुपर्नेछ ।
कुम्भः आज समय खराब नै रहनेछ । पहिलेको सफलताले हौसला जगाए पनि विवाद तथा मुद्धाहरूमा निकै सजग रहनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले अलि दुःख दिन सक्छन् । ऋण, शत्रु र रोगबाट सजग रहनुपर्ला । दिनमा ४ बनेपछि विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ । लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
मीनः आज केही खर्च लागे पनि नयाँ काममा लगानी गर्ने समय छ । मिहिनेतले प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् । प्रयत्न गर्दा देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । अरूको करकापमा गरिएको कामसमेत लाभदायी बन्न सक्छ । पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने वा आफन्तबाट टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । सरसापटमा गएको रकमले समेत मनग्ये फाइदा दिनेछ ।
बिहान ६ः५२ बजेदेखि ८ः१० बजेसम्म अमृत बेला
बिहान ८ः१० बजेदेखि ९ः२८ बजेसम्म काल बेला
बिहान ९ः२८ बजेदेखि १०ः४६ बजेसम्म शुभ बेला
बिहान १०ः४६ बजेदेखि १२ः०५ बजेसम्म रोग बेला
बिहान १२ः०५ बजेदेखि १ः२३ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिनमा १ः२३ बजेदेखि २ः४१ बजेसम्म चर बेला
दिउँसो २ः४१ बजेदेखि ३ः५९ बजेसम्म लाभ बेला
दिउँसो ३ः५९ बजेदेखि ५ः१७ बजेसम्म अमृत बेला
क्रियाशील पत्रकार महिला समूह तनहूँको अध्यक्षमा कंडेल
ओलीले संसद विघटन गरेर ज्ञानेन्द्र शाहको झझल्को दिए : प्रमुख सचेतक गुरुङ